आयो ३२ हजार ५ सय मेट्रिकटन मल
Homeराष्ट्रिय खबरआयो ३२ हजार ५ सय मेट्रिकटन मल
June 9, 2021 Desk 1 राष्ट्रिय खबर
काठमाडौं । बङ्गलादेशबाट खरीद गरिएको ३२ हजार पाँच सय मेट्रिकटन युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ । सरकार–सरकारबीच (जिटुजी)मार्फत रासायनिक मल खरीद सम्झौता अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जमा सो परिमाणका युरिया मल आइपुगेको हो ।
जिटुजी सम्झौता अनुसार बङ्गलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल उपलब्ध गराउनेछ । तीमध्ये बाँकी रहेको १७ हजार ५ सय मेट्रिकटन युरिया मल आउने क्रममा रहेको सो कार्यालयका प्रवन्धक गोरखनाथ केसीले बताए । बाँकी रहेको मल कोलकाता बन्दरगाहको बाटो गरी रेलमार्गवाट वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुख्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा आउने छन ।
सम्झौता अनुसार हालसम्म नेपाल सरकारले सबै मल प्राप्त गरी सक्नु पर्नेमा अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले बाँकी मल आउन ढिलाई भएको प्रवन्धक केसीले बताए ।
उनका अनुसार बाँकी रहेका मल छिटै नै उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तथा बङ्गलादेशस्थित नेपाली दूतावासले प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले धानको सिजनमा मलको अभाव हुन नदिन बङ्गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिकटन मल ल्याउन लागिएको हो ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जमा अहिले युरिया मल २ हजार ७ सय मेट्रिकटन, डिएपी एक हजार ४ सय २ मेट्रिकटन र पोटास एक हजार २ सय ८० मेट्रिकटन मौज्दात अवस्थामा रहेको छ ।
मौज्दात रहेको उक्त मलले पहिलो चरणको धान खेतीका लागि पर्याप्त हुने देखिन्छ । पर्सा जिल्लास्थित १ सय ३१ थोक विक्रेतामार्फत सो मल किसानसम्म पुग्ने गरिन्छ । सो कार्यालयले थोक विक्रेतालाई एक पटकमा एक सय ३० बोरासम्म मल दिने गरेको छ ।
विक्रेताहरुले स्थानीय तहले तोकेको मूल्यमा किसानहरुलाई मल बिक्री गर्ने गरेको छ । कतिपय विक्रेताले किसानसंग तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर मल बिक्री गर्ने गरेको गुनासो समेत आउन थालेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्ता कालोबजारी गर्ने थोक बिक्रेतालाई कारवाही गर्नुपर्ने मांग किसानको छ ।
पर्सामा ९० प्रतिशत किसान व्यवसायिक रुपमा धान खेती गर्दै आएका छन् । पर्सामा कूल ४६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुदै आएको छ ।lokpath
एमालेमा एकताको प्रयास जारी : के भयो कुराकानी ?
प्रमाण पत्र बुझायर २५ लाख ऋण लिन ? यस्ता छन् प्रक्रिया
माधवकुमार नेपाल पक्षको अनेरास्ववियू रातह सामाग्री लिएर सिन्धुपाल्चोक जाँदै
काठमाडौं । नेकपा(एमाले) माधव नेपाल समूहको अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू)ले हेलम्बु गाउँपालिकामा राहत वितरण गर्ने भएको छ । अनेरास्ववियू राहत सामाग्री लिएर शुक्रवार हेलम्बु प्रस्थान गरेको छ । मेडिकले टिम सहितको अनेरास्ववियूको टोलीले चामल, चिउरा, दालमोठ, कम्बल, त्रिपाल, चाउचाउ, बिस्कुट लगायतको सामग्री लिएर हेलम्बु गाउँपालिकास्थित बाढी […]
केपी शर्मा ओली;अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा ओलीले बुझाएको जवाफमा विपक्षी शेरबहादुर देउवाले माग दावी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुत्त, समेत गर्न माग गरेपनि त्यो कार्य अदालतले गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको हो । ‘यो […]
ओलीको प्रश्न, देउवा प्रधानमन्त्री भए ‘माधव नेपाल’ कुन पार्टीको ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षीले माग गरेजस्तो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुने अवस्था आउन सक्ने दाबी गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा बिहीवार पेश गरेको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्– ‘विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले […]
वामदेव गौतम र विष्णु पौडेलबीच भेटघाट
काठमाडौं । नेकपा एमाले भित्रको पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच भेटघाट भएको छ । आज बिहान गौतम निवासमा पौडेल र गौतमबीच भएको भेटघाटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ । भेटघाटका क्रममा पौडेल र गौतमबीच पार्टी […]
पछिल्लो २४ घन्टामा ३ हजार ३८४ संक्रमित थपिए
पछिल्लो २४ घन्टामा ३ हजार ३८४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । १४ हजार ४९४ पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमण पाइएको शनिवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यससँगै हालसम्म मुलुकभर ६ लाख २६ हजार ५३५ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ । जसमध्ये […]
तपाईको यो साता यस्तो रहनेछ..
हेर्नुहोस् जेठ २३ गते देखी जेठ २९ गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल
जेठ १७ गते सोमबारको राशिफल
हेर्नुहोस् जेठ १५ गते शनिबारको राशिफल
हेर्नुहोस् जेठ १३ गते बिहिबारको राशिफल
जान्नु होस लिची खानुका ४ फाइदा
काठमाडौं – कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन सी, भिटामिन ए र बी प्रशस्त पाईने फल हो, लिच्ची । यसमा पोटेशियम, क्याल्सियम, म्याग्नेशियम, फास्फोरस र फलाम जस्ता खनिजहरू पदार्थ पनि पाईन्छ । -दैनिक लिच्ची खाने गर्नाले अनुहारमा चमक आउँछ [...]
राति राम्रो निद्रा लाग्दैन ? यी हुन् कारण !
यी खानेकुरा खानुस् आँखा कमजोर हुनबाट बच्नुस्
कब्जियत बाट आराम पाउन अपनाउनुहोस् यी ५ सरल उपाय
गर्मीमा यी खानेकुरा नखाँदा राम्रो
बढ्यो सुनको भाउ, कति पुग्यो ?
साताको पहिलो दिन आइतवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । यस दिन छापावाल सुन प्रति तोला ९४ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी [...]
काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन सोमवार शेयर बजारमा झिनो गिरावट आएको छ । केही दिन लगातार रुपमा बढेको बजारमा आज गिरावट आएको हो । सोमवार नेप्से परिसूचक [...]
कालो ढुसी रो’ग लाग्नै नदिन ,यसो भन्छन् वरिष्ठ चिकित्सकहरु
काठमाडौँ – नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण भइसकेका बि’रामीमा कालो ढुसीको सङ्क्रमणसमेत देखा परेको छ । समयमै सचेत भए कालो ढु’सीबाट बच्न सकिने चिकित्सकको सुझाव छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले [...]
विवाह भइरहेका बीचमा नै बेहुलीको मृ,त्यु भएपछि बेहुलाले बेहुलीकी बहिनीसँग विवाह
विवाह भइरहेका बेला बीचमा नै बेहुलीको मृ,त्यु भएपछि बेहुलाले बेहुलीकी बहिनीसँग विवाह गरेका छन् ।यो घटना गत हप्ता भारतको उत्तर प्रदेशमा घ’टित भएको हो ।बेहुली अचानक विवाह [...]
काठमाडौबाट २० मिनेटमा दिल्ली पुग्ने नयाँ यातायात हाइपरलूप आयो
काठमाडौ । तपाई कसै न कसैले हाइपरलूपका बारेमा सुन्नुभएको हुनुपर्छ । अबको नयाँ युगको यातायात हो भर्जिन हाइपरलूप ।यसले अब विमानको युग अन्त्य गर्ने भएको छ । [...]
भारतले चीनसँगको तनावका बीच सीमामा धमाधम सडक, पुल र सुरुङ बनाउँदै
चीनसँग सीमामा तनावको स्थिति बढ्दै जाँदा भारतले विगत एक वर्षमा द्रुत गतिमा सीमाक्षेत्रमा सडक, सुरुङ र पुलहरू बनाइरहेको छ । सैनिक र ह,तियार प्रणालीलाई अग्रवर्ती क्षेत्रमा छिटो पुग्नका लागि यी निर्माणकार्यले सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । सीमा संरचनाका सवालमा भारत अहिले पनि चीनभन्दा निकै पछि छ तर दूरी […]
किन पर्यो टाइगर श्राेफ र दिशा पटानीवि’रूद्ध प्रहरीमा उ’जुरी ?
बलिउड अभिनेता टाइगर श्राेफ र अभिनेत्री दिशा पटानीवि’रूद्ध मुम्बई प्रहरीले प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ता गरेको छ। कोरोना महामारीको समयमा सरकारी नि’यम उ’ल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरू वि’रूद्ध मुम्बई प्रहरीले उ’जुरी दर्ता गरेको समाचार एजेन्सी एएनआईले जनाएको छ। मुम्बईमा को’रोना संक्रमणको संख्या भ’यावह भएसँगै पूर्ण बन्दाबन्दी गरिएको छ। दिउँसो […]
विभिन्न ११ शहरमा आयोजना भईरहेको १६ औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज (शनिबार) तीन खेलहरु हुँदैछन् । युरोकपको समूह चरण अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेलमा फ्रान्स र हंगेरीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह ‘एफ’ मा रहेको दुई टिमबीचको खेल साँझ ६:४५ बजे शुरू हुनेछ । दोस्रो खेलमा साविक विजेता पोर्चुगल र […]
रोनाल्डोले कोकको बोतल सार्नु नै अभिशाप सावित भयो
काठमाडौं । मंगलवार युरोकप २०२० अन्तर्गत पोर्चुगल र हंगेरीबीचको खेलअघिको प्रि-म्याच कन्फरेन्समा रोनाल्डोले आफ्नो अगाडि राखिएका कोकको बोतल हटाएका थिए । कोकको बोतल हटाउने क्रममा रोनाल्डोले कोक होइन‚पानी खानुपर्ने बताएका थिए । सोही बोलीका कारण कोका कोलाको शेयर मूल्य ४ अर्ब डलरले घटेको छ । त्यसपछि कोकको सेयर […]
राष्ट्रिय फुटबल टोलीले गर्यो कुवेतमा ‘टच-डाउन’
काठमाडौं। ‘फिफा विश्वकप २०२२’ र ‘एसिया कप २०२३’ छनोटका बाँकि खेल खेल्न नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली कुवेत पुगेको छ। शनिवार इराकविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेले पश्चात नेपाली टोली आईतवार इराकबाट कुवेत प्रस्थान गरेको थियो। नेपाली टोलीले यही ‘जेष्ठ २०’ गते चाइनिज ताइपेइ, ‘जेष्ठ २४’ गते जोर्डन र ‘जेष्ठ २८’ […]